Thwebula G2A 1.0.4 – Vessoft
G2A – a isofthiwe ngenombolo enkulu imidlalo kanye nemikhiqizo yokudlala kusukela popular online store G2A. Isofthiwe ine izigaba eziningi ezahlukene futhi ikuvumela ukuba ukucinga imidlalo by uhlobo, yesikhulumi noma intengo range. G2A ubonisa incazelo eningiliziwe umkhiqizo digital ngemifanekiso futhi watusa system nezidingo. Isofthiwe ikuvumela ukubuka ukuhweba ezisekelweni itholakale ngenani kanye ukukala. Futhi G2A iqukethe umsebenzi sesivikelo okuqinisekisa ukuthenga ephephile noma imali Endabeni ayilungile kusebenze key.
A anhlobonhlobo imidlalo kanye nemikhiqizo elikulesi sihloko
division Kalula ngezigaba ezahlukene
izipesheli ezikhangayo kusukela ezisekelweni ukuhweba
ukuthenga Secure noma ukubuyiselwa imali
Amazwana on G2A:
G2A Ahlobene software: